We Fight We Win. -- " More than Media ": မိထိလာ သတင်း နောက်ဆက်တွဲ
မိထိလာ သတင်း နောက်ဆက်တွဲ
မိထိလာ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းကြောင့် အိမ်၃လုံး ပျက်စီး၊ ဗလီ ၈လုံး မီးလောင်၊ ၂ဖက်စလုံးမှ လူ ၁ဦးစီ သေဆုံး ကြောင်းသိရပါတယ်။ တခြားနေရာများကိုပါဆက်လက်ပြန့် ပွားမဲ့အနေထားရှိနေပါတယ်။
အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပွားအောင် စစ်တပ်ဆိုက်ဝါးဌာန မှ စစ်သား ထောင်နဲ့ချီပြီး ဖေစ်ဘုတ်များတွင်အကောင့်ဖွင့်ကာ လှုပ်ရှားနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ စစ်သားများ ဖေစ်ဘုတ်အကောင့်မဖွင့်ရဆိုတာ ဟာ ဆိုက်ဝါး ဌာန က စစ်သားများ အတွက်မဟုတ်ကြောင်း ပြည်တွင်းမီဒီယာသမားတဦးက ဆိုပါတယ်။ စစ်တပ်က နိင်ငံရေးလှည်ကွက်လုပ်ပြီး ဘာသာရေးမီးကို မွှေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။
This will be one of the good reasons for the potential new coup for military government. Beware!
ကုလားတွေက နိူင်ငံခြားက ကုလားနိူင်ငံတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ ဒို့ နိူင်ငံမှာ လူပါးဝနေတာ အကောင်းဆုံဖြေရှင်းနည်းကတော ......ကုလားတွေနဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှ ဘာမှ မလုပ်ပါနဲ့ ....ကုလားတွေနဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ စီပွားရေး လုပ်ငန်း အားလုံကို သပိတ်မှောက်ရင် ....ဒို့ တိုင်ပြည်ထဲက ကုလားတွေ လူပါးဝနိူင်အုံမလား နောက်ပြီးတော့ ကုလားများ လူဦးရေတိုးပွါးနူံး၊ ဗလီများ တိုးချဲဆောက်လုပ်ခြင်းအား ကန့် သတ်ရန် နှင့် ခိုးဝင်နေတဲ့ ကုလားတွေကိုလည်း အရင်ရောက်နေတဲ့ ကုလားတွေက နိူင်ငံခြားက ထောက်ပံ့ငွေတွေ ယူပြီး နည်းမျိုးစုံနဲ့ မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးခြင်းများ၊ ကုလားဗလီများ အသစ်တိုးချဲဆောက်လုပ်ခြင်းများ မပြုလုပ်နိူင်စေရန် အတွက် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ကာကွယ်ကြပါ။